पिनास छ, बेवास्ता नगर्नुस्, दिमाग नै पाक्न सक्छ ? | Kantipath.com
विगत एक साता यता मौसम निकै चिसिएको छ । चिसो मौसममा रुघा खोकीले त सताउँछ नै, धेरैजसो मानिसलाई त पिनास नै पनि हुने गर्छ । चिसो मौसममा पिनासको जोखिम बढी हुन्छ । रुघा विग्रियो भने पनि पिनास हुन्छ ।
सामान्यतया, नामका किटानुको संक्रमण भयो भने पिनासको जोखिम हुन्छ । पिनासको पीडा पनि उत्तिकै चर्को हुन्छ ।
Previous Previous post: दिन शुभ बनाउन बिहान उठ्नासाथ हेर्नुस् यी १० चीज
Next Next post: कुन-कुन दिन श्रीमान श्रीमती अलग भएर बस्नुपर्छ ? थाहा पाउनुहोस् !
तपाईको दाँत दुख्छ ? यी पाँच चिज खानुहोस्
गुणकारी फल मेवा,यी रोगहरुका लागि छ उपयोगी
बिरामी परिन्छ, बारम्बार नछुनुहोस् शरीरका यी अंगहरु